Thermogenic Sweet Sweat: အဲဒါဘာလဲ၊ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
သဘာဝတွန်းလှန်: ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ချက်ပြုတ်နည်းများကိုကြည့်ပါ
အစာ	 18 ဖေဖော်ဝါရီလ 2016
မှန်ကန်စွာစားခြင်းသည်မှန်ကန်သောအစားအစာများကိုအချိန်မှန်စားသုံးခြင်းကိုဆိုလိုရုံသာမကမှန်ကန်သောအစားအစာအရင်းအမြစ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဤသဘောအရအော်ဂဲနစ်အစားအစာများသည်သဘာဝနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအစာကိုရှာဖွေနေသူများကိုရွေးချယ်မှုပိုများလာသည်။ ဘာသာရပ်အကြောင်းပိုနားလည်ချင်လား။ ဒါကြောင့်စာဖတ်ပြီးသူတို့ဘာတွေဖြစ်လဲ၊ ဒီအစားအစာတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကြည့်ပါ။
ထို့ကြောင့်ဤအစားအစာများသည်ပိုးသတ်ဆေးများ၊ ဟော်မုန်းများ၊ မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားသောသက်ရှိများနှင့်ဓာတုမြေသြဇာများမပါ ၀ င်ပါ။ အတိုချုပ်အားဖြင့်ဤအစားအစာအမျိုးအစားသည်တင်းကျပ်သောသဘာဝမဟုတ်သောမည်သည့်ထည့်သွင်းမှုမှမပါ ၀ င်ပါ။
အော်ဂဲနစ်အစားအစာစားသုံးခြင်းသည်ယေဘူယျအားဖြင့်လူနေမှုဘ ၀ အရည်အသွေးတိုးတက်စေရေးအတွက်အရေးကြီးသောကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဤအစားအစာများသည်စားသုံးမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ အကျိုးကျေးဇူးများမှာ
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပိုးသတ်ဆေးအများဆုံးစားသုံးသူများစာရင်း၏ထိပ်ဆုံးနေရာများတွင်ဘရာဇီးသည်ပိုးသတ်ဆေးပမာဏကိုစားသုံးသူလူ ဦး ရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူ ဦး ရေ ၇ လီတာ (၁) ဦး နှုန်းထက်ပိုသောပိုးသတ်ဆေးများကိုစားသုံးသည်။
ဤ ၇ လီတာအားလုံးကိုသင်စားသည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ သို့သော်သေးငယ်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်သင်၏စနစ်၌အဆုံးသတ်သည်မှာမှန်သည်။ ဤအရာများသည်အစာမချေဖျက်နိုင်သဖြင့်သင်ကျန်းမာရန်ကြိုးစားသောကြောင့်ဤအရာများကြောင့်နှစ်များတစ်လျှောက်အဆိပ်သင့်ခြင်းကိုခံစားရနိုင်သည်။
အထူးသဖြင့်ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ပေါင်းသတ်ဆေးများကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (၂) မှအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်ကင်ဆာအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအချက်များအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။
မည်သည့်အစားအစာအမျိုးအစားသည်အာဟာရတန်ဖိုးပိုကြီးသည်ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားစရာများရှိနေသော်လည်းအော်ဂဲနစ်အစားအစာများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာဟာရတန်ဖိုးရှိသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာဤအပင်များမှဖွဲ့စည်းထားသောစုပ်ယူထားသောဓာတ်သတ္တုများနှင့်အာဟာရဓာတ်များသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိစေရန်သေချာစေသည်။ ဥပမာပြောရရင်မုန်လာဥနီကယ်လိုရီ ၂၀၀ ထက်ချောကလက် ၂၀၀ ကယ်လိုရီထက်မုန်လာဥ ၂၀၀ ကယ်လိုရီစားတာကပိုကျန်းမာပြီးအာဟာရတန်ဖိုးပိုရှိတယ်လို့ဆိုချင်စရာဘဲ။
ဤအရာသည်အတော်ပင်ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်နေသော်လည်းပုံမှန်အစားအစာနှင့်၎င်းကိုအော်ဂဲနစ်ဗားရှင်းဖြင့်မြည်းစမ်းကြည့်ပါ။ အော်ဂဲနစ်ဗားရှင်းသည်သင့်အတွက်အရသာရရှိပြီးပိုမိုလတ်ဆတ်။ သဘာဝနှင့်ပိုစားကောင်းဖွယ်ရှိသည်။
အော်ဂဲနစ်အစားအစာများသည်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောအရေးကြီးသောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေသည်။ အဆိပ်အတောက်များနှင့်ကင်ဆာအန္တရာယ်များကိုလျော့ကျစေသည့်အပြင်ဤအစားအစာများသည်အရသာပိုရှိပြီးအာဟာရတန်ဖိုးလည်းပိုရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကျန်းမာတဲ့အစားအစာကိုလိုချင်ရင်ဒီအစားအစာတွေကိုစားသုံးဖို့စဉ်းစားဖို့မမေ့ပါနဲ့။
Anti-cellulite: Cellulite ၏အဆုံး! လှည့်စားမရ! ဖြစ်နိုင်ပုံကိုကြည့်ပါ ဦး ။
ဆံပင်အတွက်ကောင်းသည့်အစားအစာများ - လှပပြီးပိုမိုကျန်းမာသောဆံပင်အတွက်မည်သည့်အရာပါဝင်သည်ကိုရှာဖွေပါ။
နိဗ္ဗာန်ဆီညနေခင်း - ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်တကယ်ကူညီပေးရင်ဒီမှာရှာပါ။